महिलाको लागि, यसको कपाल, जूता र तस्विरमा निरन्तर परिवर्तन भन्दा बढी केही महत्त्वपूर्ण छैन। तथापि, कपालको रंग, प्राकृतिक कारकहरूको आक्रामक असर र हामी प्रत्येकको निरन्तर साथी - हेयर ड्रायर - सुनको टाउकोको अवस्थामा प्रतिकूल असर पार्छ। यसैले, कस्मेटिक कम्पनीहरू लगातार नयाँ सूत्रहरूमा काम गरिरहेका छन्, जसको आवेदनले क्षतिग्रस्त कपाल रेशमी र स्वस्थ चमक फर्काइदिन्छ। एक अग्रणी निर्माताओं को एक नयाँ प्रक्रिया - बाल स्क्रीनिंग ("एस्टेल") प्रदान गर्दछ। उनको बारेमा समीक्षाहरूले अन्य पुनर्वास परिसरहरूमा उपलब्ध प्रतिक्रियालाई परास्त गर्यो। यी उत्पादनहरूको प्रभावकारिता विशेषज्ञहरु र सैलून को क्लाइन्ट द्वारा उल्लेख गरिएको थियो।
बाल स्क्रीनिंगको लागि मतलब "एस्टेल" सैलून अनुप्रयोगहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ। यद्यपि, न केवल अद्भुत प्रभाव आकर्षक छ, तर ती सजिलै संग प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ विशेष उपकरणहरूको लागि कुनै आवश्यकता छैन, र प्रक्रिया 15 मिनेट भन्दा बढी लाग्दैन।
अन्य तेलको साथ संयोजनमा अर्गन तेलले तपाईंलाई प्रत्येक कपाललाई गहिरो स्तरमा शक्ति र चिसो बनाउन अनुमति दिन्छ। एकै समयमा, बाल को प्रकाश को प्रतिबिम्बित क्षमता बढ्छ - उनीहरु एक स्वस्थ चमक र एक राम्रो संगित उपस्थिति प्राप्त। प्रभाव "बाल स्क्रीनिंग" ("एस्टेल") को पहिलो प्रक्रिया पछि उल्लेखनीय छ। महिलाहरूको जवाफहरू जसले धेरै सत्रहरू पास गरेको छ भनेर बताउँछ कि परिणाम प्रत्येकको पछि बढ्छ, यो हो कि यो संचित हुन्छ।
परिणाम सरल छ! लाभ, जो कपाल स्क्रीनिंग छ "एस्टेल" - मूल्य। सबै पछि, एक सत्रको लागि रकमको सानो खुट्टाको आवश्यकता पर्छ। अब अर्थव्यवस्था र प्रक्रियाको सादगीको लागि धन्यवाद एक सुन्दर कपाल सबै हास्यहरूको लागि उपलब्ध भयो।
जीवनशैली कर्ल "बाल स्क्रीनिंग" ("एस्टेल") को प्रक्रिया पछि जीवनमा फर्केर फर्किने अवसरबाट शिल्पकारहरूको विशेष ध्यान आकर्षित भयो। कृत्रिम गोलाहरूको समीक्षा कृतज्ञता र प्रशंसाको शब्द हुन्।
त्यस्तो प्रभावकारी परिणाम तीन चरणहरू पार गरेर प्राप्त गरिन्छ। पहिला दुई-चरण कंडीशनरको प्रयोग समावेश छ जुन बालको पोषण र पोषण गर्दछ। दोस्रो चरण एक विशेष तेल को उपयोग हो, जो उपयोगी सामाग्री संग बाल saturating को अतिरिक्त, उठाए बाहिर तराजू smoothing, बाहिर देखि लिफ्ट। पुनर्निर्माण परिसरको तेस्रो चरण बालको लागि चमक तेलको अनुप्रयोग हो। अभिनव सूत्र न केवल एक उदार प्रभाव पैदा गर्दछ, तर प्रत्येक कपाल को सुरक्षा बाधा संग, तथाकथित स्क्रीन को कवर गर्दछ।
यस्तो सरल हेरफेरको लागि धन्यवाद, क्षतिग्रस्त बाल क्षेत्रहरूको गहन बहाली हुन्छ, एक स्वस्थ राज्यमा फर्किने, प्रतिबिम्ब र सुरक्षात्मक स्क्रीन सिर्जना। कर्ल यति रेशमी भए जुन तपाइँ सधैँ तिनीहरूलाई छुन चाहानुहुन्छ। यसको अतिरिक्त, कपाल स्क्रीनिंग ("एस्टेले"), जसको समीक्षाहरूले प्रक्रियाको प्रभावकारितालाई समझाएको छ, यसले आक्रामक पर्यावरणीय कारकहरूको प्रभावबाट कपालको रक्षा गर्दछ। र अधिकतम प्रभाव संचय गर्न केवल पाँच ढाल सत्र पर्याप्त हुनेछ।
कपाल कट्टर "पिक्की": जसलाई यो फिट हुन्छ
ड्रिलिंग दिशात्मक: लाभ र बेफाइदा
आफ्नो हातले बच्चा लागि पर्खाल बारहरू: रेखाचित्र, फोटो
महिला वस्त्र शैलीहरू के हुन्?
VAZ-2114: मफलर। प्रतिस्थापन, स्थापना, फोटो। VAZ-2114 मा रवशामक: जो एक राम्रो छ?
Rostov महान्, 862 वर्ष को वर्णक्रम देखि लेखएको इतिहास मा पहिलो उल्लेख को जग को वर्ष
यस नवजात लागि कुराको सूची। जाडो विशेष आवश्यकताहरु
सोभियत समयको फैशन। कसरी शैली तय गर्ने